Global Voices teny Malagasy » Pakistana, Balochistan : Tsy Voavatsy Amin’Ilay Entona Voajanahary Vokarina Ao Aminy , Nahoana ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2015 14:47 GMT 1	 · Mpanoratra Pak Voices Nandika Nancy
Sokajy: Pakistana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Quetta, Pakistana. 12 Desambra 2011 — Nivory teo amin'ny biraon'ny Sui Southern Gas Company ireo mponina ao amin'ny Lalàna Pasthoonbagh Nechari ho fanoherana ny tosika ambanin'ny enton'i Sui any amin'ny faritr'i Quetta misy azy ireo. Sary avy amin'ny pplimages. Fizakàmanana Demotix
Nosoratan'i Feroz Jan tao amin'ny Urdu ary nadikan'i Salman Latif ho an'ny PakVoices  ity lahatsoratra ity. Eto ambany eto ny dikanteny iray.
Faritany tsy mandroso indrindra any Pakistana i Balochistan, ary iray amin'ireo faritra tena tsy mandroso indrindra ao amin'io faritany io i Dera Bugti. Ao Dera Bugti no misy an'i Sui, faritra izay tonga andrin'ny toekarena Pakistane.
Nahitana entona natoraly tao amin'ny fitrandrahana enton'i Sui tamin'ny 1952 ary namatsy faritra maro tany Pakistan io entona io nanomboka tamin'ny 1955. Nantsoina hoe ‘ enton'i Sui’ ilay entona natoraly any Pakistana hita tany amin'ny fitrandrahan'i Sui. Mitondra ny anarana hoe ‘Sui Southern Gas Company ‘ sy ‘Sui Northern Gas Company ‘ ireo orinasam-panjakana roa lehibe mpitsinjara entona ao Pakistana.
Tsara lazaina eto fa ny faritanin'i Punjab sy Sindh no faritany voalohany nahazo ny famatsiana avy amin'ny enton'i Sui. Etsy ankilan'izany, 60 taona izay no nahitana ilay entona nefa hatramin'izao fotoana izao dia mbola tanàna kely 14 amin'ny distrika 30 any Balochistan  fotsiny no misitraka ny famatsiana ny entona natoraly. Sui, izay enina kilaometatra sy sasany monja avy eo amin'ny toerana nahitana ilay entona aza tsy voavatsy entona akory ary dia voatery mampiasa kitay sy arina ny olona ho fandrehitra.
Na ho an'i Quetta renivohitr'i Balochistan aza dia efa tratra aoriana tamin'ny 1970 vao tonga ny enton'i Sui. Avy eo, ny taona 1990, novatsiana entona ihany koa i Hub satria nanjary faritra indostrialy.
Mbola tsy voavatsy foana i Balochistan na dia toerana itrandrahana ny enton'i Sui aza. Vao nolazain'ny Minisitry ny Solika sy ny Harena Voajanahary ao Balochistan, Mr. Jam Kamaal, fa ” mihevitra ny hanafatra ny enton'i Sui avy any Iran isika”–midika izany fa tsy fantany hoe anarana manokana nomena ny entona vokarina avy ao amin'ny fitrandrahana enton'i Sui ny ‘entona Sui’ ary ireo entona natoraly afarana any Iran dia ho entona voajanahary tsotra ihany.
Fa mbola taratry ny olana goavana hatrany ilay fanambarana mampalahelo : satria toa tsy manana drafitra hiantohana ny fanapariahana bebe kokoa ny famatsiana ilay entona any Balochistan ny governemanta federaly sy ny governemantam-paritra fa aleony mitodika amin'ny fanafarana avy any ivelany mba hamaliana ny filàna solika fandrehitry ny faritany.
Ilaina ny manamarika fa izao no lazain'ny Andininy 158 ao amin'ny lalàm-panorenana Pakistane : 
Andininy 158. Ny laharam-pahamehana takian'ny entona natoraly
Ny faritany izay misy ny lavaka iaingàn'ny entona voajanahary no voalohany tsy maintsy mahazo amin'ireo faritra any Pakistana amin'ny famaliana ny fepetra takian'ilay lavaka iandohàna, fehezin'ireo andraikitra sy fitsipika toy ny tamin'ny andro nanombohana.
Tsotra ny dikan'izany : izay faritany nahitàna ilay harena voajanahary no tsy maintsy mahazo tombony voalohany. Mampalahelo fa ny mifanohitra amin'izany no misy amin'ny tranga any Balochistan sy ny fitrandrahana ny enton'i Sui ao aminy.
Hamafisin'ny sasany fa olana ny fiantohana famantsiana entona any amin'ireny faritra lavitra ireny noho ireo toeram-ponenana miparitaka sy ireo tany malalaka mikintaontaona any Balochistan. Nefa na izany aza dia voavatsy entona Sui ireo faritra lavitra indrindra ny faritanin'i Punjab sy Sindh.
Ireto ambany ireto misy antontan'isa momba ny fandaniana entona any Pakistana, nalaina tamin'ny Boky mivoaka isan-taonan'ny Angovo any Pakistana tamin'ny 2007 :
Faritany Vokatra (MCFT) Totaliny % Fanjifàna %
Araka ireo vinavinan'ny Bokin'Angovo mpivoaka isan-taona tamin'ny 2007, dia avy any Balochistan ny 25-26%-n'ny entona natoraly vokarina any Pakistan, nidina raha oharina amin'ny 56% tamin'ny 1995. Tamin'io taona io ihany, eo ho eo amin'ny 5,81%-n'ny vokatra avy ao an-toerana no nojifain'i Balochistan. Hatramin'ny naha-hany fitrandrahana entona miasa sy mamokatra ny fitrandrahana entona any Balochistan dia ry zareo no manome ny entona voajanahary ho an'ny faritany manontolo.
Ny tsy fahazoana anjara ara-drariny amin'ny entona Sui nandritra ny 60 taona no iray amin'ny fitarainana fototra ataon'ny mponin'i Balochistan . Ary araka ny fahitana azy dia mbola ho izay ihany no zavatra hisy.
Amin'izao fotoana izao, maro ireo fampanantenana atao mba hanovàna ny tanànan'i Gwadar ho renivohitry ny indostria, ny varotra ary ny fandrosoana. Saingy mampalahelo fa tsy ananan'i Gwadar ireo sasany amin'ny singa fototra tena ilaina  toy ny rano madio. Tsy izany ihany, fa ny 10%-n'ny mponina fotsiny no misitraka ny famatsiana entona raha toa ka miandry ny fahavitan'ireo fampanantenana goavana ny ambiny.
Voatery mividy kitay, harina, solitany fandrehitra ny mponin'i Gwadar ho ampiasainy ao an-trano. Tantarain'ny mponina iray ao Gwadar amin'ireto teny manaraka ireto ( eto ambany ny dikanteny) ny fahitan'izy ireo io olana io :
Q: Inona no olana sedrainareo amin'ny tsy fahampian'ny famatsiana entona Sui ampiasaina ao an-trano any Gwadar ?
Zahid Baloch: Tena maika aminay ny famatsiana ny entona Sui ampiasaina ao an-trano. Noho ny tsy fisiany dia voatery any amin'ny kitay no ironanay amin'ny filànay afo ao an-trano. Misy faritra mahazo entona Sui eto Gwadar, saingy faritra onenan'ireo mpanao politika manan-kaja sy ireo olona ambony ireny faritra ireny.
Fa ao an-tranonay sy ny faritra misy anay dia tsy misy famatsiana tahaka izany. Ireo trano sasany manamororna ny làlana mankany amin'ny Seranam-piaramanidina dia manana entona Sui, saingy mbola tokantranon'ny mpanakarena ihany koa ireny. Ankoatra izay, ny mahantra izay tena mila ilay entona fandrehitra mora vidy no tsy voavatsy entona Sui.
Amin'izao fotoana izao, tokony heverin'ny fanjakana Pakistane fa mendrika ny hahazo ny tombontsoany ara-drariny i Balochistan amin'ny maha-mpamokatra entona Sui azy. Ireo fepetra raisina ho hahatanteraka io fangatahana io no hampihena ny fahatsapana ho tsy mba omena zavatra, izay efa tsapan'ny maro amin'ireo mponina any Balochistan
Etsy andanin'izany, mampitombo ny hantsan'ny tsy fifampitokisana eo amin'ny mponin'i Balochistan sy ireo mponina hafa ao amin'ny firenena ny fanohizana ny politikam-panavakavahana atao amin'i Balochistan amin'ny tsy fanomezana azy ny anjarany ara-dalàna amin'ireo loharanon'angovo voajanahary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/30/70398/
 fitrandrahana enton'i Sui : http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_gas_field
 Sui Southern Gas Company : http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_Southern_Gas_Company
 Sui Northern Gas Company: http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_Northern_Gas_Pipelines_Limited
 tanàna kely 14 amin'ny distrika 30 any Balochistan: http://tribune.com.pk/story/328760/assembly-members-demand-natural-gas-for-balochistan/
 Andininy 158 ao amin'ny lalàm-panorenana Pakistane : : http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part5.ch3.html
 25-26%-n'ny entona natoraly vokarina : http://humshehri.org/place/balochistan-natural-resources/
 tsy ananan'i : https://www.pakvoices.pk/electricity-gas-internet-unavailable-in-gwadar-district/